प्रचण्डलाई प्रश्न- ‘हामीलाई लालपुर्जा खोई’ | चितवन पोष्ट
गृह » प्रचण्डलाई प्रश्न- ‘हामीलाई लालपुर्जा खोई’
भरतपुर । चितवन क्षेत्र नम्बर–३ का उम्मेदवार पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला घरदैलो अभियानमा रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ को विभिन्न वडाहरुको घरदैलोमा पुग्दा लालपुर्जाविहीन जनताले उनीसँग हातमा लालपुर्जा थमाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का लालपुर्जाविहीन नागरिकले पुस्तांैदेखि बसोबास गर्दै आएको भूमि हालसम्म पनि आफ्नो हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । १४ नम्बर वडाका भीमसेन नगर, सुन्दरबस्ती, गौचरनलगायतका गाउँमा करिब ४०० घरपरिवार लालपुर्जाविहीन छन् । उनीहरुले पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाएका छैनन् । घरदैलोमा पुगेका प्रचण्डसँग उनीहरुले हातैमा लाजपुर्जा थमाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुको जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले वाम गठबन्धनको बलियो सरकारले नै सुकुमबासीहरुलाई लालपुर्जा दिलाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘तपाइँहरुको समस्या समाधान गर्न बलियो सरकार बन्नुपर्छ ।’
सुकमबासी बस्ती पारिलोटाहारका धनबहादुर गुरूङले प्रचण्डसामु भूमिहीन, लालपूर्जाविहीन नागरिकहरूको समस्या समाधान हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गरे । उनले सकुमबासीहरुले हालसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
पार्वतीपुर गौचरनकी कुमारी गुरूङले विगतमा पनि उम्मेदवारहरुले लालपुर्जा दिन्छु भनेर आश्वासन दिएर भोट हालेको बताउँदै अब पनि त्यस्तै आश्वासनमात्र पाइने हो कि भनेर आशंका गरेकी थिइन् । भरतपुर–१४ कै राम रिजालले भूमिहीन नागरिकहरूलाई राज्य र समाजले विभेद गरेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
२०४१ सालदेखि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १४ सुन्दरबस्तीमा बस्दै आएका किरण पौडेलले सुकुमबासी, भूमिहीन किसानहरूको माग हालसम्म पूरा नभएको गुनासो गरेका थिए । भीमसेननगरका लालपूर्जाविहीन भीमलाल विकले जग्गा धनी पुर्जासहित गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुको जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘मै हो, तपाइँहरूलाई २०३६ सालमा जग्गा वितरण गर्ने कार्यक्रममा अगुवाइ गर्ने नेता । तपाइँहरुलाई याद छ कि छैन ? मलाई थाहा छ, तपाइँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको मैले नै हो ।’
मतदातालाई आश्वासन दिँदै उनले थपे– ‘तपाइँहरुले धनी पूर्जा पाउनुभएको छैन । अब ढुक्क हुनोस् तपाइँहरूले पूर्जा पाउनुहुन्छ ।’
हिजोका दिनमा कसकसले आश्वासनमात्र दिए, त्यो आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘अब आश्वासनमात्र होइन, पक्का पाउनुहुन्छ । त्यसको लागि मलाई क्षेत्र नम्बर ३ ले देशकै नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सुकुमबासीहरूलाई जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको उचित व्यवस्थाका लागि यस पटक वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसको लागि सम्पूर्ण वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजयी गराउन आग्रह गरेका थिए ।
‘म जित्नमात्र आएको होइन’
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू जित्नलाई मात्र चितवन नआएको बताएका छन् । उनले चितवनको समग्र विकासको लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताए । ‘चितवनलाई तीव्र विकासको आवश्यकता छ, विकास र समृद्धिमार्फत चितवनलाई देशकै नमुना जिल्ला बनाउनु छ, त्यसको लागि म चितवन आएको हो’ प्रचण्डले भने ।
वाम गठबन्धन क्षेत्र नं. ३ चितवनद्वारा आइतबार मंगलपुरमा आयोजित सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले भने, ‘वामपन्थीहरूको स्थिर सरकारले मात्र देशको मुहार कायापलट गर्छ । ५ वर्षमा चितवनको मुहार अवश्य फेरिन्छ ।’
वामपन्थीहरूको एकता राष्ट्रको एकता भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक एकता कायम गरी आगाडि बढ्नसमेत सुझाए । दाहालले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा आफ्नो कुनै प्रतिस्पर्धी नभएको दाबी गरेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा शान्तिमार्फत् समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपना स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखेको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता आफू जीवित हुनाका नाताले उनको सपना पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई गिरिजाबाबुलाई संझिएर आफूलाई मतदान गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
क्याप्सन ः लालपुर्जा मागेका स्थानीयसँग प्रचण्ड ।
माओबादीसँगको २३ वर्षदेखिको नाता तोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी